Kulankii 9aad ee wasaaradaha Cadaadala JFDI iyo Xafiisyada Cadaaladaha Deegaanada iyo Ismaamulada Dalka oo lagu soo gaba-gabeeyay Maanta Xarunta deegaanka ee Magaalada jigjiga. - Cakaara News
Kulankii 9aad ee wasaaradaha Cadaadala JFDI iyo Xafiisyada Cadaaladaha Deegaanada iyo Ismaamulada Dalka oo lagu soo gaba-gabeeyay Maanta Xarunta deegaanka ee Magaalada jigjiga.
Jigjiga(CakaaraNews) Talaado Oct 08,2013.Wasaarada cadaalad ee heer fadaraal ayaa waxay 3dii bilood ama rubaciiba(Quarter) hal mar la kulantaa dhamaan xafiisyada cadaaladaha ee ka jira 9ka deegaan iyo 2da ismaamul magaalo,iyada oona kulamadaasi lagu qabto marba deegaan.
Qiimayntan ayaa sanadkan waxaa lagu qabtay xarunta DDSI ee jigjiga kulan socday mudo 3 maalmood oo ka socday Nogob-Hotel ee magaalada jigjiga,iyadoona ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaarada cadaalada JDFI ato Getajaw abay,dhamaan madax-xafiiseedyada xafiisyada cadaaladaha ee 9ka deegaan,2da ismaamul,masuuliyiin ka socoday xafiiska diwaangalinta xaqiijinta bayaanada ee JDFI iyo waliba marti sharaf kale.
Hadaba kulankaasi oo ay ujeedadiisu ahayd sii xoojinta xidhiidhka wada-shaqayneed ee laamaha hay'adaha-cadaalada heer-fadaraal iyo kuwa heer-deegaanba, iswaydaarsiga khibradaha, dhagaysiga,xeer-nidaamyada iyo bayaanada saraynta Shrciga,xaqdhawrka Dastuurka DFI iyo warbixinta waxqabadkii 2005 dhamaan haayadaha cadaalada heer fadaraal iyo kuwa heer deegaan, Kulankan ayaa halku-dhig looga dhigay Saraynta Sharciga iyo ka qaybgalka shacabkeena ayaan ku xaqiijin karnaa horumarka iyadoona siwayn loogu gorfeeyay mudadii uu socday shir-wadareedkani dhagaysigii warbixinada ka dib sidii si wada jir ah loogu wajihilahaa qorshaha sanadka 2006TI Xaqsoorka Cadaaladeed iyo Saraynta Sharciga iyada oo tiirarka ugu waawayn ee qorshahaasi rukunada looga dhigay ahaayeen:-
dhisida iyo dhamaystirka ciidan horumarineed oo ah dhinaca cadaaladaha,gaadhsiinta shacabka adeeg hufan oo ah dhinaca cadaalada. Kulanka oo ay shir gudoominayeen wasiirka wasaarada cadaalada ee heer fadaraal iyo madaxa xafiiska cadaalada DDSI mudane C/risaaq ayaa waxaa ugu danbayntii lagu gaba gabeeyay sidii loo sii xoojinlahaa wada shaqaynta iyo xidhiidhka ka dhaxeeya hayadaha cadaalahadah ee heer fadaraal iyo kuwa heer deegaan